ငါကျော်ဘို့လိင်ခဲ့ကြပြီမဟုတ် 10 နှစ်ပေါင်း - သတင်း Rule
ငါကျော်ဘို့လိင်ခဲ့ကြပြီမဟုတ် 10 နှစ်ပေါင်း
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “ငါကျော်ဘို့လိင်ခဲ့ကြပြီမဟုတ် 10 နှစ်ပေါင်း” Pamela Stephenson က Connolly ကရေးသားခဲ့သည်, The Guardian ကတနင်္လာနေ့တွင် 21 ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလများအတွက် 2015 08.00 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
ငါကျော်ဘို့လိင်ခဲ့မမူသူတစ်ဦးအသက် 46 နှစ်အရွယ်အမြိုးသမီးရယ် 10 နှစ်ပေါင်း. ဒါကဒီအစီအစဉ်ကိုဘယ်တော့မှခဲ့သည်, ငါမူကားအစဉ်အမြဲစက်ဝိုင်းထဲမှာဖမ်းတာ: ငါကအပေါ်ဝင်ဒါကြောင့်ငါကအလားအလာမိတ်ဖက်ဖို့ဒီကိုရှင်းပြနိုင်ပုံကိုအကြောင်းအများကြီးနဲ့ကြာကြာစိုးရိမ်ပူပန်, ဒါကြောင့်ရရှိသွားတဲ့ရှုံး. ငါသည်ကိုယ်အသက်ကို၏ကျန်လိင်နှင့်ချစ်ခင်ခြင်းမရှိဘဲအသက်ရှင်နေထိုင်ချင်ကြပါဘူး.
အခြားသူတစ်ဦးနှင့်အတူလိင်ကချိတ်ဆက်ဖို့သီအိုရီအဆင်သင့်ဖြစ်ခြင်းကောင်းတစ်ဦးပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်. သငျသညျအခြို့သောအန္တရာယ်များကိုယူကြမည်, သော်လည်း, နဲ့မလုံခြုံမှုနှင့်အရှက်ဆန့်ကျင်သူမည်သူမဆိုများအတွက်အနည်းငယ်သာကာကွယ်ရေးရှိပါတယ်, နေပါစေသူတို့ဖြစ်မည်အကြောင်းအတွေ့အကြုံဘယ်လောက်လိင်က. တကယ်တော့, ငြင်းပယ်ခံရဖို့ပွင့်လင်းဖြစ်ခြင်း - ပင်လှောင်ပြောင် - ရှေ့ဆက်သင့်ရဲ့အလုပ်၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. အီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါ, ကိုယ့်ကြောင့်ရှူရှိုက်ခြင်းနှင့်သည်းခံဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောပြ.
အခုအတွက်တော့, ရိုးရှင်းစွာပျော်စရာနှင့်ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုများအတွက်အခြားသူများနှင့်ချိတ်ဆက်မှုများကိုအောင်အာရုံစိုက်ဖို့ကြိုးစား. သင်သည်ကိုယ်ကိုပိုပြီး gregarious ဖြစ်လာဖို့ခွင့်ပြုခဲ့လျှင်, ရှိရာသို့အလျင်အမြန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းသင်သဘာဝကျကျသင်ဆွဲဆောင်ပါလိမ့်မည်ဘယ်သူကိုမှတစ်စုံတစ်ဦးကိုတွေ့လိမ့်မည်. ထိုအခြိနျတှငျ, သင်အမှန်တကယ်သင်တို့၏သက်သာဇုန်ထားခဲ့ပါနှင့်သင်၏အလိုဆန္ဒလမ်းကိုဦးဆောင်လမ်းပြကြကုန်အံ့ရန်ရှိသည်လိမ့်မည်.
ပေါင်ထားသောဥစ္စာကိုယခု မှစ. သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှကြင်နာတက်ဖြစ်, သငျတို့သပျော်မွေ့ရှိသည်ဖို့ထိုက်သောအယူအဆဘက်ယမ်း. တိုင်းတစ်ခုတည်းလူ့ဖြစ်လျက်ရှိတပါးအားဆွဲဆောင်မှုရှိနိုင်ပါသည်. နှင့်သင့်ရေရှည်ခုတော့အကြောင်းအလားအလာမိတ်ဖက် '' အနုတ်အမြင်များနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်ကြပါဘူး: သငျသညျသူတို့ကိုပြောပြရန်မလိုပါ, ဒါပေမဲ့သင်ပြုလျှင်ပင်, များစွာသောလူတို့သညျရိုးရိုးသငျသညျမွငျ့မားသောစံချိန်စံညွှန်းများယူဆလိမ့်မည်.
• Pamela Stephenson က Connolly လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမမှန်အတွက်အထူးပြုတစ်ဦးအမေရိကန်အခြေစိုက် psychotherapist ဖြစ်ပါသည်.
•သင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအပေါ် Pamela Stephenson က Connolly ထံမှအကြံဉာဏ်များလိုပါလျှင်, ကျွန်တော်တို့ကိုသင့်ရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ၏အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်ပေးပို့ private.lives@theguardian.com (ပူးတွဲပါဖိုင်မပို့ကြဘူးကျေးဇူးပြုပြီး). တစ်ခုချင်းစီကိုရက်သတ္တပတ်, Pamela အဖြေတစ်ခုပြဿနာကိုရွေးကောက်ပြီး, အွန်လိုင်းပုံနှိပ်ထုတ်ဝေနှင့်ပုံနှိပ်ထဲမှာပါလိမ့်မည်သည့်. သူမကပုဂ္ဂိုလ်ရေးစာပေးစာယူထဲသို့ဝင်မခံနိုင်သောနောင်တ.
← သင်ကသင်၏ဖုန်းအားသွင်းရန်သင့်ရဲ့ကို So​​cks ခုနှစ်တွင် pee ပါ့? ဂရိတ်ခေါင်းဆောင်များမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ကအားလုံးကိုမပွု →